Fijoro an-telefaona sy fijoroana amin'ny takelaka
Manokana amin'ny famolavolana, bobongolo, fanamboarana, fivarotana, OEM izahay
& Serivisy ODM misy vokatra isan-karazany, toy ny mpihazona fiara andriamby, fametrahana finday bisikileta, mpitana telefaona fitaratra an-tariby, mpihazona telefaona finday, mpihazona takelaka lohan-doha ary mpihazona finday kamo. Ny vokatray dia malaza be any Amerika Avaratra, Eropa, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana.
2021 New 36 degre rotatable bisikileta bisikileta sela sela sela Store Mount Smart bisikileta finday
Ity mpihazona finday bisikileta ity dia mampiasa ny abs + silicone fitaovana, izay matanjaka sy mateza. Ny fampiasana ny entona silicone eo amin'ny sisin'ny roa an'ny tompon-telefaona dia afaka miaro ny telefaona amin'ny friction sy kitroka. Mandritra izany fotoana izany, ny bracket dia manohana ny fihodinana 360 degre, malalaka misafidy ny zoro tsara indrindra. Ity mpihazona finday finday ity dia tsotra sy atsinanana mba hametrahana, tsy misy fitaovana ilaina, hanodikodina fotsiny ny screw ao amin'ny Chuck. Ny fifanarahana malalaka, ity mpihazona finday finday ity dia afaka mifanentana amin'ny bisikileta, môtô, strollers, sns, ary afaka mifanentana amin'ny karazana finday sy takelaka 3,5-10.5 santimetatra.
Universal Adjustable Accessories Phone Mobile Holder Car Headrest Tablet Mount Stand
Mpiambina Extendable Extendable ho an'ny takelaka sy findayNy mpihazona an-tsehatra eran-tany dia mampiray ny "kalitao voalohany amin'ny endrika tsara sy stylish". Tsotra ny mametraka ary azo apetraka ao amin'ny seza aoriana ao anaty fiara tsy misy fitaovana. Azonao atao ihany koa ny mankafy ny fialam-boly tonga lafatra ao anaty fiara. Ity bracket ity dia mampiasa pads silicone mba hampivoatra ny fifandonana ary hiantoka fa tsy ho tapitra ny fitaovanao. Ny fijoroana haingam-pandeha dia azo ampiharina amin'ny finday sy solosaina finday rehetra amin'ny 4-10.5 santimetatra ny solosaina sy ny solosaina.
Fitaovana famaranana finday avo laptopo avo laptop
Asehoy 1: toerana azo ampiharina: Desktop amin'ny birao, trano, piano, afaka manokatra ny fampiasana mivantana, ny fianarana dia ny fampiasanaEndri-javatra 2: Mifanaraka: finday - 4-12.9 santimetatra sy takelaka mitondra kodiarana maimaim-poanaFisongadina 3: Ny fiarovana ny silica gel, tsy misy slip, tsy scratch chuck dia vita amin'ny fitaovana silica gelEndri-javatra 4: Ny fanohanana mavesatra dia tsy mampihorohoro ny lanjan'ny metaly vy, zorony efatra amin'ny silicone tsy misy skidEndri-javatra 5: ny fihodinan'ny làlan-droa tarihin'ny torolàlana amin'ny alàlan'ny fihodinana 360 ° milaminaEndri-javatra 6: Aza manakana ny tsipika fahitana, tsy misy ny fanitsiana ny screw amin'ny habakabaka dia mety handraisana ny famandrihana misokatra dia ny fahazoana ny vokatra: tsy misy toerana farafahakeliny 1000 PC 58 andro voalohany, 25 andro taty aoriana
Vidiny ambongadiny 360 Adjustable Cell Desk Mount Laptop Tablet Stand Mobile Desktop Phone Holder
Endri-javatra 1: Toerana azo ampiharina: Desktop ho an'ny birao, trano, piano, afaka manokatra fampiasana mivantana, Mianara mampiasaEndri-javatra 2: Mifanaraka: finday -4-12.9 mirefy finday sy takelaka mifamadika malalaka mitsangana sy mitsivalanaEndri-javatra 3: silica gel fiarovana, tsy mitongilana, tsy mikisaka chuck dia vita amin'ny silica gel fitaovanaEndri-javatra 4: ny lanjan'ny vy fanohanana mafy dia tsy manozongozona ny lanjan'ny vy fototra, zorony efatra ny anti-skid silicone fototra miorina mafy.Endri-javatra 5: Fihodinana tari-dalana Lohan'ny baolina tari-dalana 360° fihodinana feno zoro, miorina tsara sy malefaka Endri-javatra 5: aza sakanana ny tsipika fahitana, aza mibodo toerana ny fanitsiana visy fototra dia azo disassemble ary fitahirizana mety.Endri-javatra 6: Haavo azo amboarina 30-50cm mety amin'ny toe-javatra samihafa Fotoana fanaterana vokatra: Tsy misy toerana moQ 500 PCS 50 andro ho an'ny andiany voalohany, 25 andro aorian'ny
Ny mpanjifa aloha, ny kalitao voalohany
Manaraka ny tanjona "mpanjifa aloha, kalitao voalohany" izahay ary mamolavola vokatra vaovao tsy tapaka mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifanay manokana. Mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra mihazona finday dia mifehy faran'izay tsara ny kalitaon'ny akora hatramin'ny famokarana izahay, fizahana 100% alohan'ny fandefasana. Hivoatra vokatra avo lenta izahay, hanome serivisy avo lenta ary hanatsara ny tombom-bolan'ny mpanjifanay. Vonona izahay hiara-hiasa amin'ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana maharitra. Shenzhen Special Tengda Technology co., LTD. manome ny finday tsara indrindra ho an'ny mpanjifa manerantany. Makà antsipiriany misimisy momba ireo tompona telefaona ambongadiny, mifandraisa izao!
Afaka manome OEM / ODM, entam-barotra, serivisy mpamatsy Amazon, ary koa famolavolana fonosana, fanontana marika ary fandefasana entana any amin'ny serivisy FBA. Izahay dia hampivelatra vokatra avo lenta, hanome serivisy avo lenta ary hanatsara ny tombom-bolan'ny mpanjifanay. Vonona izahay hiara-hiasa amin'ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana maharitra.
Portable 3 ao amin'ny 1 aluminium alloy enjobtable desktop
Ny fijoroana amin'ny solosaina aluminium dia vita amin'ny fitaovana aluminium avo lenta avo lenta. Ny famolavolana tsotra sy matanjaka ary ny fototra midadasika dia mahatonga ny laptop mijoro ary tsy mangovitra; Ny fototry ny tohiny dia azo amboarina amin'ny sakany, ary ny solosaina finday roa dia azo apetraka amin'ny mitsangana amin'ny fotoana mitovy. Ny pad pad sy ny rindrina vita amin'ny bracket dia ahafahan'ny fitaovana elektronika ho mafy sy napetraka amin'ny desktop ao amin'ny bracket.
Omeo OEM / ODM
Shenzhen Special Tengda Technology Co., Ltd. dia miorina ao an-tanànan'i Shenzhen, faritanin'i Guangdong, akaikin'ny seranan'i Hong Kong sy Yantian, ny fepetra ilaina amin'ny logistika, ny famokarana sy ny ambongadiny stents finday ary ny fononteny takelaka mihoatra ny fito taona, ilay orinasa manarona faritra 2500 metatra toradroa, miaraka amina mpiasa 40 mahery, tsipika famokarana 6, QC& Fitaovana milina fanandramana QA, afaka mamokatra andiana telefaona maharitra 150000 isam-bolana izahay.
Manokana izahay amin'ny famolavolana, ny bobongolo, ny fanamboarana, ny varotra ary ny serivisy fananganana vokatra isan-karazany, toy ny fijanonan'ny telefaona andriamby, fijanonana an-tariby ho an'ny bisikileta, fitoerana telefaona fitaratra an-tariby, fitoeran-telefaona finday, fitoerana takelaka misy lohan-doha ary olona kamo finday. Ny vokatray dia malaza be any Amerika Avaratra, Eropa, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana.
Afaka manome OEM / ODM, entana enti-mody, serivisy mpamatsy Amazon, ary koa famolavolana fonosana, fanontana marika ary fandefasana entana any amin'ny serivisy FBA. Hanolotra vahaolana izahay hanampiana ny mpanjifantsika hahomby kokoa. Manantena ny hihaino anao izahay. Mifandraisa aminay avy hatrany.
Avelao fotsiny ny mailakao na ny nomeraon-telefaonanao ao amin'ny forme contact mba hahafahanay mandefa quote maimaimpoana ho anao amin'ny endriny maro be!